November 21, 2010 by chowutyee မုန့်လင်မယား လုပ်စားကြအောင်
ပုလဲရေ ရေမုန့်တော့ မလုပ်စားဖူးဘူး။ လုပ်စားဖြစ်ရင် ချက်နည်းလေးပါ တင်ပေးမယ်နော်။ ဂဏန်းကော်ကြော်တော့ မသိပေမယ့် တန်ပူရာ ဂဏန်းကြော် လုပ်စားဖူးတယ် ချက်နည်းကို ဒီဘလောက်မှာ တင်ထားတယ်…😀
Sunny ရေ ကျေးဇူးပဲနော်.. မုန့်လင်မယားကို အားပေးတဲ့သူ တော်တော်များတာပဲ၊ မုန့်လင်မယားရောင်းစားရင် ကိုက်လောက်ချည်းရဲ့… ဟီးဟီး နောက်တာပါ။ အားလုံးကို အလကားကျွေးမှာပါ…😛
pig yee yay i really wanna eat tooahint ahint😥
အရမ်းကောင်းပါတယ် ဝတ်ရည်ရေ။ မျှဝေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါနော်🙂
Really Thanks to TTSweet!!!😀
မချော အတွက် အထူးပါဆယ်တစ်ပွဲ ပို့ပေးလိုက်မယ်နော်…😛
ကိုသားကြီး အ၀စားသွားပါဗျို့.. ပါဆယ်နဲ့တစ်ပွဲပါ လေပျံနဲ့ ပို့ပေးလိုက်မယ်နော်..🙂
phyu ရေ အရင်ဆုံး ဆန်မှုန့်နဲ့ ပဲစိမ်းမှုန့်ကို အရင်ရောမွှေလိုက်ပါ။ ပြီမှ ရေ(လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံးစာ) အနည်းငယ်ထည့်ပြီ မုန့်နုယ်သလို သမအောင် နုယ်လိုက်ပါ။ ပြီမှအလိုက်သင့် ရေနည်းနည်းခြင်းထိထည့်ပြီ ရောမွှေသွားပါ။ ကြာရင်တော့ အနည်ထိုင်မှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မုန့်လင်မယားလုပ်ခါနီးရင် ဇွန်းလေးနဲ့ မွှေမွှေပေးပြီမှ လောင်းထည့်လိုက်ပါ။ ၀တ်ရည်ကတော့ မွှေးတံဆိပ်(ဆန်စိမ်းမှုန့်)ကို သုံးတာပါ…😀
နွေးနွေးရေ မုန့်လင်မယားက ထင်သလောက် လုပ်ရတာ မခက်ပဲ၊ အရမ်းလွယ်ပြီ စားလို့လည်းကောင်းတယ်.. ဗန်းသာ ရှိရင် နွေးနွေးလည်း လုပ်စားလို့ရပြီ…😛
Yes, sis. I did it on last week and it was really easy as you said. At first, i couldn’t make it because i put too much heat and less oil. Then next round I tried with medium heat and put more oil.. guess what I made it.. It was an excitement. Once again, thanks for posting. If possible, would you mind posting how to cook ငါးရှဉ့်ခြောက်စပ် (in hotel style)? I really appreciated it.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်… ခုတော့ မုန့်လင်မယားပဲ လုပ်စားလိုက်ဦးမယ်…🙂
အိမ်ရှင်မရဲ့ ဟင်းလက်ရာကို ၀တ်ရည်လည်း အမြဲဝင်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်.. ကျေးဇူးပါ..🙂